11/07/2018 - Page 3 sur 4 -
Fanajariana ny fotodrafitrasan’ny lalana : Mpiasan’ny ARM 71 nahazo fiofanana
11/07/2018 admintriatra 0
Ao anatin’ny tetikasa fanajariana ny fotodrafitrasan’ny lalana (PAIR) eo anivon’ny ARM na “Autorité routière de Madagascar” dia mpiasa eo anivon’ity farany miisa 71 no nahazo fiofanana. Fampiofanana izay nentina indrindra hanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpiasan’ny ARM, …Tohiny
Russie 2018 : Manana tombony Angleterre, nefa tsy milavo lefona i Croatie
Lalao manasa-dalana faharoa no tanterahina anio alina ao anatin’ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny baolina kitra. Ny kianjan’i Loujniki ao Moscou no hampiantrano ny lalao. Raha ny fijery eny ambony latabatra, dia manana tombony …Tohiny
Fampirantiana : Mahavariana ny « Tany mena » an’ilay maorisiana kim Yip Tong
Hiarahan’ny sary sy ny feo. Taorian’ny fakana aingam-panahy sy famoronana teto Madagasikara, dia naranty tetsy amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo ny « Tany mena », izay vokatry ny asa nataon’ilay mpanakanto maorisiana Kim Yip Tong. Tanjon’i …Tohiny
Baolina kitra : Maro ireo toerana manolotra hetsika ho an’ny « Mondial 2018 »
Hetsika iray hiarahan’ireo mpinamana sy mpankafy baolina kitra ny fanarahana ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny baolina kitra atao any Russie. Maro ireo toerana eto an-drenivohitra no manolotra hetsika manokana ho an’ireo manana fikasana …Tohiny
Filoham-pirenena mivady : Nankahery ny vahoakan’i Toamasina
Niray fo tamin’ireo traboina. Vantany vao nivoaka ny tanànan’i Toamasina ny rivodoza AVA dia nidina avy hatrany tany an-toerana nijery ireo fahasimbana sy ny voina nahazo ny vahoakan’i Toamasina ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady niaraka ...Tohiny
Marc Ravalomanana : Nanala an’Antananarivo tao anaty fako
Hetsika sendikaly : “Tsy natao hanonganam-panjakana”